Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1402
Analakely : mpividy volamena efatra voasambotry ny polisy
Par Taratra sur 10/03/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Mpividy volamena tsy ara-dalàna miisa efatra indray saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany voalohany, omaly nandritra ny hetsika “opération mpividy volamena tsy ara-dalàna”. Araka ny fanazavan’ny polisy, teny akaikin’ny EPP Analakely sy teo anoloan’ny tranombarotra Shoprite no nisamborana ireto olona ireto. Voalaza fa mbola am-panaovana ny asany mihitsy izy ireo no tonga tampoka ny polisy. […]
Par Taratra sur 10/03/2016 En Bref, NS Malagasy
Vehivavy iray 25 taona monina eny Behoririka no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny boriborintany voalohany Analakely teo am-pifohana rongony, teny Soarano, ny talata 8 marsa teo, tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany maraina. Tamin’ny fanadihadiana natao azy no nilazany fa eny Behoririka no hividianany rongony. Natao ny vela-pandrika ka ny androtr’iny ihany, tratra […]
Par Taratra sur 10/03/2016 Divers, NS Malagasy
Tsy misy miraharaha ! Velon-taraina ny mponina eny Faravohitra sy ny manodidina fa mirongatra ny asan-jiolahy tato ho ato. Mandry andriran’antsy hatrany ny mponina na andro na alina. Efa voasokajy ho faritra mena amin’ny asan-jiolahy mihitsy eny an-toerana satria tsy misy ny fandraisana andraikitra mivantana ataon’ireo tompon’andraikitra voakasik’izany. Isan’andro, mitondra faisana ny mpianatra, ny mpandeha an-tongotra […]
Orambe sy rivotra nifofo : olona iray nianjeran’ny takelaby, tafon-trano ampolony maro niongotra
Nanaitra ny mponin’Antananarivo sy ny manodidina ny fifofofofon’ny rivotra sy ny orambe niseho ny talata teo. Nanimba zavara maro teto an-dRenivohitra iny andro ratsy iny. Takelaby fametrahana dokambarotra miisa telo nianjera, teny Behoririka, Ankazomanga ary teny Anosy, izay nandratra olona iray. Efa nahazo fitsaboana teny amin’ny HJRA izy io. Ankoatra izay, trano ampolony maro niongotra […]
… Ka inona no mbola mampahantra antsika ?
Par Taratra sur 10/03/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
« Mahantra eo ambonin’ny harembe ny Malagasy… ». Tato ho ato, malaza io fehezanteny io na koa hoe nampalaza ity Nosy ity hatrany ivelany any mihitsy. Tsy mety mihidy mantsy ny « robinet » ivoahan’ny andramena sy ny harem-pirenena isan-karazany, tsy voatanisa, mankany ivelany. « Ampiharo ny lalàna », hoy ny mpitondra amin’ny kabary, manoloana ity tranga manaratsy endrika azy ireo […]
Manitrikitrika ireo zanaka Antandroy : «Tena tany Anjozorobe ny zanaky ny filoha»
Par Taratra sur 10/03/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Nitondra valin-kafatra, tamin’izay nambaran’ny jeneraly Rakotomahanina Florens, sy ny fanamarihana nataon’ny filoha Rajaonarimampianina, mikasika ny « raharaha Anjozorobe », tetsy Andrefan’Ambohijanahary, indray, omaly ny solontenan’ireo zanaka Antandroy. Ireto farany izay nanitrikitrika fa « tena tany Anjorozobe ny zanaky ny filoha ». « Anananay daholo ny porofo fa miandry ny tohiny izahay ary tsy mbola hiteny. Betsaka ny fanodinkodinan-dresaka… Tsy hanaiky […]
Kitra – «Ligue des champions d’Europe» : hiaro ny tombon’isa azony ny PSG any Angletera
Par Taratra sur 09/03/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Anisan’ny famaranana kely mialoha ny fotoana ny lalaon’ny PSG sy ny Chelsea, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, amin’ity anio ity. Manantombo ny Frantsay, saingy vonona hanala vela ny Anglisy. Hitodika any amin’ny kianja Stamford Bridge avokoa ny mason’ny mpitia baolina kitra anio alina. Hifantoka amin’ny lalao ampahavalon-dalana miverina, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i […]
Misaona ny tontolon’ny fanatanjahantena, indrindra ny taranja rugby. Nindaosin’ny fahafatesana, omaly talata tamin’ny 3 ora maraina, teo amin’ny faha-42 taonany, Rasedinah Jean André, fantatry ny rehetra amin’ny solon’arana hoe Rafaly Be. Mpilalao nandrafitra ny Makis de Madagascar, teo aloha ary nanana ny fahaiza-manaony. “Azo lazaina fa tampoka ity fahafatesan-dRafaly Be ity satria tsy hita hoe […]
Basikety : tanjon’ny ligin’i Boeny ny hampitombo ny fifaninanana ao aminy
Razafindraibe Arnaud. Filoha am-perinasan’ny ligin’i Boeny eo amin’ny taranja basikety. Maromaro ireo hetsika federaly horaisin’ity ligin’i Boeny ity amin’ity taom-pilalaovana 2016 ity. Ankoatra ny Play-off amin’ny “Coupe du Président” farany teo, fifaninanam-pirenena maro no hampiantranoan’ny ligy, toy ny eo amin’ny U14, U20, N1B. Izany hoe, lasa renivohitry ny basikety malagasy i Mahajanga amin’ity taona ity. […]
Ilay sambo mihantona any Faux Cap : manara-maso ny hisarihana azy ny APMF
Efa tonga any Faux Cap, any atsimon’ny Nosy, ireo teknisiniana avy amin’ny APMF (Agence portuaire maritime et fluviale), mijery ny fomba hanesorana ilay sambo mihantona ao amin’io fari-dranomasina io ny 29 febroary teo. Sambo lehibe (200 m ny halavany, 45 m ny sakany) avy ao Afrika Atsimo izy io nitondra arina 160.000 t ho any […]
Fanajariana ny tany : mitsinjo ny 15 taona ho avy ny kaominina Vinaninkarena
Par Taratra sur 09/03/2016 Economie, NS Malagasy
Mpamboly sy mpiompy, toy ny any amin’ny kaominina ambanivohitra hafa, ny 95%-n’ny mponina ao Vinaninkarena, distrikan’Antsirabe II. 15.000 ny isan’ny mponina ao amin’io kaominina io miparitaka any amin’ireo fokontany fito mandrafitra azy. “Mitombo tsy mitsahatra ny isan’ny tantsaha, nefa mihakely tsy maharaka izany intsony ny velaran-tany azon’izy ireo hajariana isan-taona. Mazava ho azy fa mihena […]
Par Taratra sur 09/03/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tsy mamaky boky intsony ny tanora. Tsy liana amin’ny soratra, variana amin’ny teknolojia, sns, ny tanora. Ampahany kely ihany no marina amin’ireo, rehefa tena zohina. Aiza ho aiza ny hoavin’ny boky? Lohahevitra resahina matetika, ary mitovy foana ny valiny: mihalefy ny fitiavana mamaky boky eo amin’ny tanora. Rehefa tena zohina anefa, ny fitiavana mamaky ilay […]
Niavaka ny fankalazana ny Andron’ny vehivavy ho an’ny kaominina Ivato, omaly. Ankoatra ny hetsika nataon’ireo fikambanam-behivavy izay notarihin’ny vadin’ny ben’ny Tanàna Randrianarisoa Hobisoa, nisy koa ny fizarana fanomezana ho an’ireo vehivavy sahirana 200 tao an-toerana. Nizarana vary, menaka ary siramamy ireo vehivavy sahirana avy amin’ny fokontany enina sy kartie fito ao an-toerana. Niarahana niasa tamin’ny […]
Samy nanana ny fomba nankalazany ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy ny sokajim-behivavy misy eto amintsika. Niavaka ny diabe nataon’ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao, sy ny ekipany ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra niainga avy eny Mahamasina ary niafara teny amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, omaly vao maraina. Nitohy tamin’ny fampahafantarana ny tsimokaretina Vih/Sida ny hetsika ka […]
Navoakan’ny gazety boky amerikanina Forbes ny 1 marsa teo ny anaran’ireo olona 100 manankarena indrindra eto ambonin’ny tany (Manana renivola amina dolara amerikanina). Misongadina ny Afrikanina, saingy tsy mifanaraka amin’izany ny fari-piainan’ny mponina ankapobeny. Amin’ity taona 2016 ity, nahita mpanefoefo miisa 1.810 ny Forbes, somary nihena kely ny isan’izy ireo raha ampitahaina tamin’ny […]
Taom-baovao malagasy : hiavaka ny fitsofan-drano
Par Taratra sur 09/03/2016 NS Malagasy, NS-Culture
« Ny tso-drano, zava-mahery », hoy ny fahendren’ny Malagasy. Hiavaka ny amin’ity taona ity satria ny Malagasy anisan’ny zokiolona indrindra no hanatanteraka izany eny amin’ny foiben’ny fikambanana Fitohasina nasionaly, Ikianja Ambohimangakely ny alakamisy maraina izao. Rakotondrazafy, 110 taona avy any Soavinandrina Itasy, taranakan’Andriambahoakaafovoanitany no hanatontosa izany. Fantatra fa hanotrona ity zokiolona indrindra ity mandritra io fitsofan-drano, io […]
Ho vary sy rano manomboka eto. “Namaly ny antsonay tamin’ny volana desambra ny Vondrona orinasa Sodiat, hanohana ny TV Plus amin’ny fandaharana Kopi kolé andiany fahefatra amin’ity taona ity. Mbola ho avy ny sasany fa namaly izany voalohany aloha izy ireo”, hoy ny filoha tale jeneralin’ny fahitalavitra TV Plus , omaly tetsy Antanimena. Natao tamin’io […]
Notontosaina ny alahady teo, tetsy amin’ny hotely Panorama eny Andrainarivo, ny fifaninanana mandaha-teny na mikabary amin’ny teny japoney. Izany dia karakarain’ny masoivoho japoney eto amintsika miaraka amin’ny fikambanan’ny mpampianatra teny japoney sy ny fikambanana Sakura. Efa andiany faha-25 ny natao tamin’ity taona ity. Niisa 11 ny mpandray anjara ary nizara sokajy telo : ireo vao manomboka […]
Valin-kafatry ny mpanorina ny Tim : “Malalaka amin’ny heviny Rakotoarivelo Mamy”
Tsy niandry ela. Namaly avy hatrany ny ho fisintahan-dRakotoarivelo Mamy eo anivon’ny antoko Tim, ny filoha nasionaly, Ravalomanana Marc. “Malalaka amin’ny fanehoany hevitra ny rehetra. Eo amin’ny fanaovana politika, misy ny atao hoe “Challenge” ka nisafidy izany Rakotoarivelo Mamy”, hoy izy tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna, Analakely, omaly raha nanotrona ny andron’ny 8 marsa. Ankoatra izany, […]
Andron’ny vehivavy : navondrona tao Antsirabe ny fankalazana
Niavaka tsy toy ny isan-taona ny fanamarihana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy eran-tany ho an’ny faritra Vakinankaratra, omaly. Hatramin’izay, samy nankalaza ity andro ity ireo vehivavy isaky ny distrika fito mandrafitra ny faritra. Omaly, navondrona tao Antsirabe renivohitra teo amin’ny kianjan’ny Fahaleovantena ny fankalazana. Nanana solontena avokoa ireo fikambanam-behivavy avy any amin’ireo kaominina ao […]
Noraisin’ny Praiminisitra Ravelonarivo teny Mahazoarivo, omaly, ny filoha tale jeneralin’ny Vondrona orinasa Dangote. Nivoitra ny ho fiaraha-miasa indrindra eo amin’ny sehatry ny fanampiana antsika momba ny herinaratra. “Hamaha ny olan’ny delestazy ny orinasa senegaley Dangote. Tsy hifaninana fa hiara-kiasa amin’ny Jirama izy ireo. Ho foana tanteraka io olana io raha tanteraka ny fiaraha-miasa eo amin’ny […]
Mitaky ny zony ny mpanohitra
“Ampiharo ny lalàna mifehy ny mpanohitra, eny na misy iny hevitry ny HCC iny aza. Miantso ny minisiteran’ny Atitany izahay hamoaka ny lisitra ho an’ireo nisoratra ho mpanohitra mba hahafahanay mizaka ny zonay”, hoy Ralambomahay Toavina. Nohitsiny fa izy ireo ihany no hany tena mpanohitra eto, satria efa manosika mafy ny Tim, Mapar, MMM ary […]
Fiaraha-miasa : hanatrika ny fetim-pirenen’i Maorisy ny filoha
Raha tsy misy ny fiovana, ho avy hanatrika ny faha-48 taon’ny Fahaleovantenan’ny Nosy Maorisy, ny filoha Rajaonarimampianina sy ny delegasiona hotarihiny ny faran’ny herinandro izao. Anisan’ny voaasa amin’izany ny tenany. Navoitran’ireo haino aman-jery, ao amin’ity Nosy ity, rahateo, fa karazan’ny ho fiaraha-miombona antoka sy fiangana vaovao eo amin’ny roa tonta izao fitsidihana mety hataon’ny filoha […]
Vonoan’olona tao amin’ny Bar Salohy Toamasina : naiditra am-ponja i Fernand sy Fernandel
Nidoboka avy hatrany ao amin’ny fonjaben’Ambalatavoahangy i Fernand sy Fernandel izay voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny vonoan’olona tao amin’ny Bar Salohy Ankirihiry Toamasina, ny alakamisy teo… Niaiky ny famonoana olona nataony i Fernand sy Fernandel nandritra ny famotorana azy roa lahy teny amin’ny polisy Tanambao Bazarikely, araka ny fanazavan’ny kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys. Anisan’ny nenjehin’ny […]
Halatra jirofo-Lehiben’ny Faritra Analanjirofo : mitovy amin’ny manodinkodina zaza tsy ampy izay tratra
Nambaran’ny lehiben’ny Faritra Analanjirofo, Ramarson Jaques, fa hampitoviana amin’ny olona manodinkodina zaza tsy ampy taona ny manao fiotazana lavanila mbola tsy matoy. Tsy vitan’ izay ihany fa mbola angalarina atao latsak’ alina eny an-tsahan’ny mpamboly. Ireto farany izay misedra fahasahirana amin’ny fikarakarana ny voliny ary koa efa sahirana amin’ izao vanin’ andro izay ka miandrandra […]
« Précédent 1 … 1 400 1 401 1 402 1 403 1 404 … 1 464 Suivant »